2013 ~ ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
ဥ ( မြန်မာ့ရုပ်ရှင်)
5:49:00 AM movies No comments
2012 ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာ အကယ်ဒမီ ဆုရရှိသွားတဲ့ ဥ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို မကြည့်ရသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ထက်ကြည့်ချင်သေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
Advanced_Uninstaller pro11 .29
11:30:00 PM software, Uninstaller No comments
windows 8 နဲ့အင်မတန်မှ လိုက်ဖက်တဲ့ Uninstaller လေးပါ..။
Uninstaller ဆိုပေမဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေကတော့ အတော်များပါတယ်..။
ပုံမှာတွေ့ရတဲ့ အတိုင်း သူရဲ့အသုံးဝင်ပုံတွေကို မြင်နိုင်ပါတယ်..။
File and Registry တွေကိုလည်း ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်..။
ဒါကgeneral tools ကနေသွားလိုက်ရင် ..တွေ့ရမှာပါ။
Uninstaller programs ကနေ ကိုယ်မလိုချင်တော့တာတွေကို Uninstall လုပ်နိုင်ပါတယ်..။
startup manager ကနေ windows startup မှာ ကိုအသုံးမလိုသေးတဲ့ programs တွေကို Disable လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်..။
Quick cleaner ကနေ ကိုယ်စက်ရဲ့ မလိုအပ်တာတွေကိုလည်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်..။
လိုအပ်ရင် အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ...
11:09:00 PM Driver, software No comments
DriverPack Solution 13 R320 Final Full Version.
ဒါကတော့ ကွန်ပျူတာမှာ လိုအပ်တဲ့ Driver ပြသနာတွေကို အလွယ်ကူဆုံးဖြေရှင်းပေးနိုင်တာလေးမို့ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်..။ Windows တင်မယ်ဆိုရင် ကွန်ပျူတာ ၀ယ်စဉ်ကပါလာတဲ့ Driver CD မရှိတော့ဘူးဆိုရင် ..Driver ပြသနာဟာ အချိန်အတော်ယူ ဖြေရှင်းရပြန်ပါတယ်..။
ကျနော်ကိုယ်တိုင် upload လုပ်တဲ့ ဖိုင်တွေ မဟုတ်တဲ့ အတွက် အဆင်မပြေတာရှိခဲ့ရင် ပြောခဲ့ပါ..
11:00:00 PM movies No comments
ဒီဇာတ်ကားကတော့ လက်ရှိရုံတင်ဆဲ ဇာတ်ကားပါ..
26 ရက်နေ့ ကျနော်တင်ခဲ့တာ မှောင်နေလို့ ကြည့်လို့ အဆင်မပြေတဲ့ သူငယ်တွေအတွက်
အခု 100% အကြည် လေးပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
Release Date: 13 December 2013 (USA
အောက်မှာ Thriller လေးကြည့်ပြီး နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်..။
အလည် ရောက်ခဲ့ရင် Like လုပ်ပြီး အားပေးခဲ့ ပါအုန်း..
လိုအပ်တာ လိုချင်တာ ရှိရင်လည်း comments ဖြစ်ဖြစ်
cbox မှာဖြစ်ဖြစ် ပြောခဲ့ပါ..
10:45:00 PM software, Windows7No comments
5:51:00 AM movies No comments
ကြည့်ပြီးတဲ့ သူတွေကတော့ သီးခံပြီးတော့ ကျော်သွားပေါ့ဗျာ..
ကျနော် ကြိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်လေးမို့ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်တာပါ..
၂၀၁၃ ရဲ့ Top 10 ၀င်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါပဲ..
နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်..။
4:27:00 AM software No comments
သူရဲ့ အသုံးဝင်ပုံတွေက များလွန်းလို့ အောက်က သူရဲ့ Features တွေကိုပဲ ကြည့်လိုက်ပါ..
ကွန်ပျူ ကလိတတ် သူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်..။
Portable လေးဖြစ်တာမို့ double click လေးပေးလိုက်ယုံနဲ့ အသုံးပြု နိုင်ပါပြီ..
Support removing different DVD copy protections like CSS, RC, RCE, APS, UOPs, ARccOS, etc.
Decrypt protected DVD movies with lossless quality
Copy DVD to DVD/DVD folder/ISO, burn DVD folder to DVD, ISO to DVD
Rip DVD movies to videos for playback on iPad, iPod, iPhone, Android devices etc.
Rip encrypted DVD movies to various video formats: M4V, MP4, AVI, MPG, M2TS, 3GP, 3G2, HTML5 embed video (MP4)
Support playing on any portable devices such as iPad, iPod, iPhone, Android devices, etc.
Customize DVD structure to copy/clone/shrink/burn/rip
CopyaDVD to your hard drive asaDVD bakcup folder. Support both DVD-5 and DVD-9.
Burn DVD Folder or ISO Image File from hard drive disc toablank DVD disc.
7:43:00 AM music No comments
ကျနော် အနှစ်သက်ဆုံး အနုပညာရှင် တယောက်ဖြစ်တဲ့
ကျနော်တို့ ရဲ့ Hero ကြီး ကိုလေးဖြူရဲ့ သီချင်းသစ်တွေကို
Ba Phit Phit
Sate Pu Tay
Way Kae Yin
Shaolin Warrior (Kungfu Kid) (2013)
3:52:00 AM movies No comments
သိုင်းကားကြိုက်တဲ့ သူတွေ နှစ်သက်မယ်ထင်ပါတယ်..
Starring: Ye Jianwei, Chen Ke, Liu Ruicheng
Thriller လေးကြည့်ပြီး နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ Full movie ကို ဒေါင်းယူ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်..။
4:53:00 PM software No comments
ဒီကောင်လေးကတော့ ကျနော်တို့ ကွန်ပျူတာကနေ download လုပ်ထားတဲ့
ရုပ်ရှင်တွေကို ဘာ Format မှ ပြောင်းစရာမလိုပဲ မည်သည့် DVD စက်နှင့်မဆို
Easy DVD Creator provides youatool to convert AVI, DIVX, XVID, DIV, MPEG, MPG, DAT, WMV, ASF, ASX, RM, RMVB, MOV, QT, 3GP, 3G2, MP4, M4V, FLV, and TOD into DVDs that you can watch in your home DVD player. With Easy DVD Creator, you can turn the vacation, wedding, and family movies into DVDs that you can burn and share with your friends and family. Easily create DVDs in your own home. Just add video files into the file list, click Start and it's done. Supports 8.5GB DVD disc supports Multi Threading conversion.
4:25:00 PM Nero, software No comments
Nero Burning ROM 15.0.25.0
Nero ဆိုမှတော့ မိတ်ဆက်ပေးဖို့ မလိုဘူးထင်ပါတယ်..
Burning software တွေမှာတော့ လူသိအများဆုံး ဖြစ်သလို
လွယ်ကူတယ် ရိုးရှင်းတယ် မြန်ဆန်တယ်..
ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း DVD /CD Burn စရာရှိရှင် Nero နဲ့ပဲ Burn ပါတယ်..
အခုကျနော်တင်ပေးလိုက်တဲ့ Nero Burning ROM 15.0.25.0 ကတော့
Portable လေးဖြစ်တာမို့ double click လေးပေးလိုက်ယုံနဲ့
Nero Burning ROM 15.0.25.0 ကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ...
6:36:00 AM movies No comments
Year: 2013: Duration: 95 min
ဒီဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်း အချို့ဟာ ဗမာပြည်ထဲမှာ နော်..
ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ နေရာတချို့ကို ဗမာဇာတ်ဆောင်တွေပါဝင် သရုပ်ဖော်ထားပါတယ်..။
K-Lite Codec Pack 10.20 Mega(Full)
4:21:00 AM Player, software No comments
ဒီကောင်လေးကတော့ Windows Media Player ရဲ့မိတ်ဖက် player လို့ပြောမယ့်ဟာလေးပါ..။
ဒီမှာလည်း..select all video select all audio ကို ရွေးပေးရပါမယ်..။
လိုအပ်ရင်K-Lite Codec Pack 10.20 (Full) ကို အောက်မှာယူလိုက်ပါ..။
7:46:00 AM software No comments
All My Movies isanifty utility for cataloging one's movie collection. It supports all formats, new ones - DVD, Video CD, AVI and MPEG files, and old ones as well - VHS tapes, for example.
The program helps easily track films - which movies are loaned, which ones are borrowed, etc. Most importantly, the program is specifically designed for DVDs and works fully automatically with all digital carriers.
If absent, this information can be imported from online movie databases, like IMDb. com with one mouse click or entered manually.
1. Install All My Movies.
3. Copy the file "allmymovies.exe" from Crack folder to installation directory. [C:Program FilesAllMyMovies]
3:42:00 AM software No comments
အမည်ကို ကြည့်ယုံနဲ့ ဘာအတွက် အသုံးဝင်သလဲ သိမှာပါ..
HDD ကို လိုသလို Partition ခွဲမယ် ပေါင်းမယ် ..
ကြိုက်သလို လုပ်ချင်ရင်တော့ ဒီကောင်လေးကို စက်ထဲထည့်ထားလိုက်ပါ..
Full version လေးအဖြစ်သုံးနိုင်အောင် crack ဖိုင်လေးထည့်ပေးထားပါတယ်..
လိုအပ်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ..
5:42:00 AM software No comments
ဒီကောင်လေးကတော့ Display Edition အမျိုးမျိူးလုပ်နိုင်တဲ့ software လေးပါ..
Desk Top Wallpaper,
Mulit Monitor taskbar
အစရှိတဲ့ Display Edition အမျိုးမျိုးကို ဒီကောင်လေးနဲ့
full version အဖြစ်သုံးနိုင်ဖို့ keygen လေးထည့်ပေးထားပါတယ်..
4:49:00 PM software No comments
desktop အလှဆင်တာ ၀ါသနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ နှစ်သက်မဲ့ software လေးပါ..။
ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကွန်ပျူတာကို အလှဆင်ရတာ ၀ါသနာ တခုလိုဖြစ်နေလို့....။
၀ါသနာတူသူ အလှအပမြတ်နိုးသူတွေ အသုံးပြုဖို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်တာပါ..။mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ် အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ..။
သူကတော့ video, audio and text chats software ပါ..
Camfrog အကောင့်ဖွင့်ပြီး သုံးနိုင်သလို
face book အကောင့်ကနေလည်း video, audio and text chats အဖြစ်သုံးနိုင်ပါတယ်..
တော်ယုံ internet ရှိယုံနဲ့ သူကို အသုံးနိုင်ပါတယ်..
The tool enables seeing, speaking and writing to other chat room members simultaneously. Not all video chats require you to haveaWebcam, so you can also participate withoutacamera. Camfrog chats are either private or public and you can make calls to mobile or landline phones.
A range of parental controls in Camfrog Video Chat help to protect minors from revealing too much of their privacy and from joining certain chat rooms when using the Instant Messenger. Other settings of the Skype competitor include Privacy and Safety, Video and Audio, History, Languages, and Hotkeys.
Dropbox 2.4.10 Apk ( 23GB space)
6:16:00 AM Android2comments
Dropbox 2.4.10 ( 23GB space)
Dropbox ဆိုတာ ဘာတွေအသုံးဝင်သလဲ ပြောပြစရာ မလိုအောင် အားလုံးသိကြမှာပါ..
သူရဲ့ အဓိက အသုံးပြုကြတာကတော့ files, movies ,music, and photo တွေကို
ကိုယ့်ရဲ့ Gmail acc လေးနဲ့ sign in လုပ်ပြီး Dropbox မှာ သိမ်းမယ် ..
အချင်း ချင်းအပြန်အလှန် ရှယ်ကြမယ်..
ဒါပေမယ့် ခက်တာက ကျနော်တို့ အများစုက Free သမားတွေဆိုတော့
Dropbox က အစမှာ 2GB ပဲ space ပေးပါတယ်..
ဒီတော့ ကျနော်တို့က နည်းမျိုးစုံနဲ့ Free space များများရအောင်ကြိုးစားရပါတယ်..
အခုကျနော် တင်ပေးလိုက်တဲ့ Dropbox လေးကတော့ သူကို install လုပ်လိုက်တာနဲ့ 23GB Free space စပေးပါတယ်..
ဒီ Apk လေးကိုဒေါင်းပြီးရင် ဖုန်းထဲမှာ ရှိပြီးသား Dropbox အဟောင်းကို uninstall လုပ်လိုက်ပါ..
(Dropbox ထည့်ထားတာမရှိဘူးဆိုရင် ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ)
ပြီးရင် အခုရတဲ့ Dropbox လေးကို intall လုပ်လိုက်ပါ..
ပြီးရင် Free space မှာ 23BG တိုးသွားတာ တွေ့ရပါမယ်..
advanced systemcare pro 7.19.63.7
6:31:00 AM Advanced System Care, software No comments
သူငယ်ချင်းတို့ အတွက် Christmas လက်ဆောင်လေးပါ..
ကွန်ပျူတာမှာ မလိုအပ်တဲ့ junk file တွေကိုရှင်းလင်းပေးတာ စက်ကိုလေးလံစေတဲ့ Malwere တွေကို ဖယ်ရှားပေးတာ registry တွေကို repair လုပ်ပေးနိုင်သလို ကွန်ပျူတာအသုံးပြုရတာ ပေါ့ပါးသွက်လက်စေဖို့ RAM ကို released လုပ်ပေးတာအပါအ၀င် ကွန်ပျူတာမှာလိုအပ်ချက်များစွာကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ software လေးဖြစ်တာမို့ ကွန်ပျူတာ သုံးစွဲသူတိုင်း ဆောင်ထားသင့် တယ်ထင်ပါတယ်..။
ဘာကီးမှ ထည့်စရာမလိုတဲ့ pro version လေးပါ..။
What’s new in Advanced SystemCare v7.1
CCleaner Professional & Bussiness Edition. v4.09.4471
6:56:00 AM CCleaner, software No comments
Cleaner Professional & Bussiness Edition. v4.09.4471
ကွန်ပျူတာသန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ software တွေထဲမှာ ဒီCcleaner ကိုကျနော် အကြိုက်ဆုံးပါပဲ ။
အရင်ကလည်း Ccleaner ကိုတင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်..။အခုလည်း update လေးတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
ဒေါင်းလို့ရတဲ့ အထဲက ccsetup ကို install လုပ်ပြီးရင် ပိတ်လိုက်ပါ..။
ပြီးရင် Crack ဖိုင်ကို ဖွင့်လိုက်ပါ..။ပြီးရင် ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း အစဉ်လိုက် လုပ်ယုံပါပဲ..။
How to reset Administrator password Offline by usi...
Connectify Pro 3.3.0.23104 Full Version
sea games news score Apk
CorelDRAWGraphicsSuiteX6 (x86 / x64)
Viber for PC and Android
မရှိ မဖြစ် တဲ့ software
Genuine XP All Editions
Internet Download Manager IDM Plus APK 7.00 beta
ashampoo slideshow studio 2.0.1
Why can't format